Hogganaan basaasaa Sudaan duraanii US akka hin galle dhorkaman - BBC News Afaan Oromoo
Hogganaan basaasaa Sudaan duraanii US akka hin galle dhorkaman
Hogganaan tajaajila tikaa Sudaan duraanii Saalaah Gosh sababii himannaa mirga namoomaa sarbuu irratti dhiyaateef jecha akka US hin gallee dhorkaman.
Ibsa Haajaan biyyoota alaa Motummaa US baasee , Mr Gosh tibba itti gaafatamaa Tajaajilawwan Nageenyaa fi Tika Biyyaaleessaa (NISS) Sudaan turaniitti darara mirga namoomaa keessatti hirmaachusaaniif ragaa qabatamaa qabna jedha.
Miseensoonni maatii isaas akkasuma dhorkamaniiru.
Pirezidaantiin duraanii biyyattii Omaar al-Baashir kan Mr Gosh isaan jalatti tajaajilaa turan baatii Ebla ture kan aangoorraa buufaman.
Isaan boodas Mana maree humna waraana Ce'umsaatuu biyya hogganaa jira. Haa tahu malee mannimarichaa paartilee mormitootaa siiviliin hogganaman waliin tahuun biyyattii waggota sadiif hanga filannootti bulchuuf waliigalaniiru.
Humni waraanaafi mormitoonni Sudaan labsiirratti waliigalan
Ergaa karaa tiwiitaraan, Barreessaan Haajaa Alaa US, Maayik Pompe'o barreessaniin motummaa ce'uumsaa Sudaan siviiliin hogganamuu deeggarsa isaanii ibsaniiru.
Ergaa barreessaniinis, har'a Salaah Gosh fi miseensoota maatii isaa haaluma seera kutaa 7031 (c) tti sababii hirmannaa inni Sudaan keessatti mirgoota namoomaa sarbuu, keessatti taasiseef ifattan morma jedhan.
Isaanis US galuu hin danda'an. Kanneen mirga namoomaa sarban hunda itti gaafatamtoota taasisuu itti fufna jedhaniiru.
Akkasumas waamicha ummanni Sudaan motummaa ce'umsaatiif taasisu akka sivilii dhugaan hogganamuufi kan bulchiinsa Baashiriin adda ta'uuf isaan waliinan dhaabbadha jedhan.
Manni maree humna waraanaa hogganaa ce'umsicha hogganaa jiruu fi Gamtaan mormitootaa gurguddoon yeroo ce'umsaa waggaa sadii Sudaan keessaatiif daandii mijessuuf guyyaa 10 dura waliigaltee waliin mallatteessaniiru.
Waliigalteen aangoo qoodachu ammoo Sanbata kana akka mallattaa'u eegama.
Hokkara Sudaan: Waraanniifi mormitoonni Sudaan waliigaltee mallatteessan
Sudaan: Humni waraanaafi mormitoonni Sudaan labsiirratti waliigalan